Andrianainarivelo Hajo : « Tsy voatery hiandry ny taona 2018 isika… » | NewsMada
Andrianainarivelo Hajo : « Tsy voatery hiandry ny taona 2018 isika… »
Par Taratra sur 31/08/2016
Nanindry mafy. « Anjaran’ny Malagasy ihany ny manapaka raha toa tokony hanohy ny asany na tsia ny filohan’ny Repoblika. Izany hoe, tsy voatery hiandry ny taona 2018 isika », hoy ny filoha nasionalin’ny Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo, omaly tamin’ny resaka nifanaovana taminy, teny Ankerana, foiben’ny antoko. Nohamafisiny fa voamarina ao anatin’ny lalàmpanorenana izany, indrindra ao amin’ny andininy faha-52, milaza fa azon’ny filohan’ny Repoblika atao tsara ny mametra-pialana. Aorian’io fametra-pialana io, milaza ny andininy faha-53 ny lalàmpanorenana fa afaka 30 andro, farafahakeliny, 60 andro, farafahabetsany, ny hanatanterahana fifidianana filohan’ny Repoblika vaovao. « Fanajana ny lalàmpanorenana ny fangatahana ny fametram-pialan’ny filoha ahafahana manatanteraka fifidianana mialoha ny fotoana », hoy ihany izy.
Tompon’ny teny farany isika malagasy
Nahitsy koa ity praiminisitra lefitra teo aloha ity nilaza fa raharaham-pirenentsika anatiny izao ka tsy tokony hitsabahan’ny vahiny. « Adidy sy andraikitry ny samy Malagasy ny mamaha ny olana misy ao aminy, indrindra raha resaka fifidianana. Tsy anjaran’ny vahiny ny mitsabaka amin’ny raharaha anatin’ny firenena. Madagasikara, an’ny Malagasy ary ny Malagasy ho an’i Madagasikara. Noho izany anton’izany, isika irery ihany no tompon’ny teny farany amin’ny fampandehanana ny raharaha anatiny, indrindra raha resaka fifidianana », hoy Andrianainarivelo Hajo. Nanteriny fa tsy sakana ny vola amin’ny fanatanterahana fifidianana mialoha ny fotoana. Takina ny fifidianana madio sy mangarahara ahafantarana marina ny tena hetahetan’ny vahoaka, ny olona atokisan’ny mpifidy maro anisa hitantana ny firenena mankany amin’ny tena fandrosoana amin’ny alalan’ny fanajana ny lalàna velona, ny fizarana ny fahefana ary ny fanajana ny andrimpanjakana, ny mpiara-miasa ary ny mpiara-miombon’antoka rehetra, araka ny nambarany ihany.
Momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena kosa, takiny ny hipetrahan’ny mangarahara. Tokony hampiseho izany amin’ny fitantanana ny firenena ny mpitondra rehetra isan’ambaratongany, raha ny heviny.
Namoaka ny « boky fotsy » …
Etsy andaniny, voaporofo, ankehitriny, fa tsy mahavita ny asany ny mpitondra. Vokany, niakatra hatrany ny vidim-piainana ary mihamijaly sy sahirana ny vahoaka. « Nomena fotoana ahafahana manaporofo fa mahavita ny mpitondra, saingy tsy tanteraka izany. Noho izany, tsara ampahafantarina ny vahoaka iray manontolo ny asa vitan’ny mpitondra », hoy ny mpanorina ny antoko Malagasy miara-miainga.
Tsiahivina fa nanoratra boky fotsy ahitana ny asa rehetra nataony Andrianainarivelo Hajo ary azon’ny besinimaro jerena. « Tokony hanao tahaka izany ihany koa ny mpitondra. Adidin’izy ireo ny mampiseho mangarahara amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin’ny fanatanterahana ny tamberin’andraikitra. Zon’ny vahoaka ny mahafantatra ny nampiasana ny volam-bahoaka, na tamin’ny alalan’ny hetra na tamin’ny alalan’ny trosa, nangatahina tamin’ny anarany », hoy izy.